Geomarketing vs. Ubumfihlo: Impembelelo yokuGuqulelo kwi-User-Geofumed
Geomarketing vs. Ubumfihlo: Impembelelo yoGuqulelo kumsebenzisi oqhelekileyo
NgoFebruwari, 2015 Geospatial - GIS, Google umhlaba / imephu
Ukususela kokungeniswa kwayo kwishishini lokuthengisa, geolocation liye laba yinto engummiselo, ebonwa njengenye yeenzuzo eziphambili zezixhobo eziphathekayo, xa kuthelekiswa nama-PC, ngokwembono yabathengisi.
Nangona kunjalo, imbambano yobucala iyathethwa, leyo, ngokweminye, ichaphazelekayo yi-geolocation ngokwayo. Kamva, siza kubhala ngokufutshane ngolu hlobo.
Ukusetyenziswa geolocation kwi ukuthengisa
Enye yamathuba anikezelwa ukuthengiswa kweempahla kukuba iimveliso zingasebenzisa iteknoloji ye-geolocation ukufikelela kubasebenzisi ngemilayezo efika ngexesha malunga nezixhobo zabo. Injongo ephambili kukutsala abathengi kwi-brand ukuvala intengiso. Nangona kunjalo, kulula ukucacisa ukuba i-geolocation iye yaphuza ukukhupha.
Nangona kunjalo, kukho iimeko ezithile eziye zazuza ukuma kwazo, ngokubonakalayo zibonakalayo:
Ukuqhaqha kwezicelo: Ngokwesiko, ulwazi olusekelwe kwendawo aluyinto ebelwana ngayo ngokulula okanye rhoqo.
Ukwanda kwindlela yokusetyenziswa kwezicelo zeselula kwaye, ukongeza, ukwanda kwenani lezintlu ezisetyenziswa ngolwazi lwendawo ukuqhuba (iivenkile zokutya Iimephu zeGoogle, umzekelo), kuye kwabangela ukuba abasebenzisi abaninzi bazimisele ukwabelana ngale nkcukacha.
Ngoku, kulula kakhulu kubasebenzisi ukuvula okanye ukucima indawo yokwabelana kwendawo, edla ngokwaneleyo ngokukodwa. Kuyinto elula eye yabangela ukuba i-geolocated advertising inventory ikhule kakhulu.
Geomarketing ngexesha langempela: los Iimarike zexesha langempela ziye zaphumela ekuhlaleni ngokubanzi kweentlobo ezahlukeneyo zolwazi kunye neentengiso ezimbalwa, njengendlela yokungena kwiintengiso ezininzi kwi-App.
Ndiyabulela kule mibini mibini (ukugqithiselwa kwezicelo kunye nokwenza i-geomarketing ngexesha langempela), ngoku kunokwenzeka ukuqalisa iiprojekthi ezisekelwe i geolocation, Mkhulu ngokwaneleyo ukuze ufumane ngakumbi ukukhangisa.
Abasebenzisi banokufumana, ngokwemvelo, iimkhankaso zentengiso ezithatha ingqalelo indawo yabo, ngelixa ziphengulula ngezicelo.
I geolocation Ngaba ichaphazela ubumfihlo?
Abantu, namhlanje, basebenzisa amathuluzi amatsha angabonisa indawo zabo kwaye, ngaphezu koko, banokuthatha iifoto, ngexesha langempela, kwinto abayenzayo, bacinga kunye / okanye kufuneka. Nangona kunjalo, nangokwezinye izimvo, i-geolocation ihlasela ilungelo elingcwele lobumfihlo, elibizwa ngokuba "ilungelo lokuzimela ngasese".
Ewe, kukho izicelo, ezinje Umhlaba ka-Google, osebenza nje njengesikhokelo kwaye, kungekhona, ukuyihlasela.
Kunjalo, le mpikiswano sisemi ngokumalunga sendawo nokubanakho kwabo kakubi abasebenzisi, i estárseles emfihlweni labo, njengoko iziphumo kwezinye izifundo inkxalabo etyhilwe zokungakwazi ukunandipha uthe wedwa.
Iziphumo zophando ezithile, zityhila ukuba ngaphezu kwesiqingatha sabantu abanezixhobo eziphathekayo i geolocation, baxhala malunga nokulahlekelwa kwemfihlo, ngokusebenzisa imisebenzi yabo yokutshintshela indawo.
Kolunye uhlolisiso, phambili ngokukhethekileyo inkampani yokhuseleko Webroot, 1.500 indlebe abanini izixhobo kunye sendawo ubunakho, kuquka abantu 624 e-UK.
Imiba yengozi geolocation
Enye yeemeko ezibonisa impembelelo yesicelo kubasebenzisi, kukuba yonke ixesha bayayityhila indawo yabo, oko bayenzayo, oko bathengayo kwaye, phantse, bayashumayela ukuba bakwi-cashashi bathatha imali, nangona kuya kuba ngubani owenzayo
Kodwa ngokweengcali, akukho malunga neeprogram okanye i-hardware, kodwa malunga nabasebenzisi ngokwabo, kuba bamele baqaphele idatha abayinike khona kunye neempembelelo abanokuzenza ngayo ebomini babo.
Kwaye oku akusebenzi nje kuphela geolocation kodwa, ngokunjalo, ngezinye iindlela ezivumela ukusetyenziswa kolwazi, olufanele lube noluntu kwaye lusondele. Kanye njengoko kuthethwa kwaye kusekho kwimfundo ekusebenziseni i-Facebook, ngokunjalo ingaba nale nkqubo yeendawo.
Oku kukuxhatshazwa kwangoku, njengabantu abaninzi ababaziyo iziphumo zale nkonzo, bangaphi abantu abazi ukuba imifanekiso abayithathayo kufuneka ifakwe, njengendlu entsha, nayo yonke into kunye nedilesi yayo.
Zehla ukuba yintoni ebalulekileyo ngokwenene na, phambi kokuba ngokuveza yonke into eyenziwayo, ukhuseleko lomntu ngamnye (umsebenzisi sendawo), ukwenzela ukuthintela iimeko ezinzima inokuphetshwa, ngokwenene. Kunokwenzeka ke ukuba okukhusela ukhuseleko ekhusela yabucala.
Post edlulileyo«Edlulileyo Fumana i-sub-metric accuracy kwi-iPad / iPhone
Post Next Ukuqhathaniswa kweCandeloOkulandelayo "